Riyooyinkii Hazard oo dhaawac ku dheelay.
Home Horyaalka Spain Riyooyinkii Hazard oo dhaawac ku dheelay.
Riyooyinka Real Madrid ee Eden Hazard ayaa si dhakhso leh ugu beddelay nooca riyooyinka sariirta-qoyan ee ubadku u fidin lahaa hooyadood marka loo baahdo in la caawiyo.
Waxaa lagala soo saxeexay Chelsea heshiis bilow ah oo ah 89 milyan ginni oo kor u kici kara ilaa £ 150m, xidigaan Belgianka ah kaliya ma ahan inuu kusii jeedo Santiago Bernabeu kuwa ugu fiican laakiin weli ma uusan helin meel ku dhow.
Ilaa iyo haatan, Hazard wuxuu ku soo laabtay afar gool iyo 7 caawin 35 kulan oo uu saftay xilli ciyaareed iyo badh. Ma ahan tirada aad ka filan karto nin lagu tilmaamay inuu yahay midka adduunka ugu fiican iyo kan bedeli laha Cristiano Ronaldo.
Waxa uu ku guuleystay inuu dhaliyo 11 gool laakiin Hazard ayaa laga saaray dhaawiciisii sagaalaad tan iyo markii uu ku soo biiray Real Madrid Xiddiga reer Belguim ayaa waxaa ku siyaaday dhowr kiilo oo culeys ah taas ayaana ah mida ku noqotay caqabada Waxa uu seddex jeer ka badan yahay dhaawacyada Madrid marka loo eego goolasha La Liga.
Halgankan adag ayaa u dhiman Hazard wuxuu doonayaa inuu kusoo laabto sida ugu dhaqsiyaha badan sidii lagu yaqiinay Halganka dhaawaca Hazard waa mid xun.
28 sano jikaan lagu magacaabo Hazard wuxuu cadeeyay inuusan u saxiixi doonin qandaraas cusub kooxda Chelsea isla markaana uu kaliya u saxiixi doono Real Madrid xilligaas oo 12 bilood uga haray heshiiskiisa isagoona dhabarka u taagay Blues Waxay eheed ineey sugaam 12 bilood oo 100% ay la soo wareegi lahaayeen Hazard si xor ah, laakiin waxay umuuqataa Real inay iloobeen taas
Previous articleHarry Redknapp oo saadaaliyay halka ay ku dhameysan doonaan kooxaha Man United, Liverpool FC Premier League
Next articleKadib Heshiiska hordhaca ee David Alaba la gaaray Real Madrid, Maxaa kala socotaa Sadex boos uu ka xalinayo